Dhawaan Si De Hempburger? Baarayaasha Iswiidhishku waxay si guul leh u cuneen Hilib laga sameeyay Hemp • Drugs Inc.eu
Si dhakhso leh burger hemp? Baarayaasha Iswiidhishku waxay si guul leh uga sameeyeen hilib xaydha
9 Oktoobar 2020
“Aadanaha runtii waxaan jecel nahay inaan wax ku calalinno. Taasi waa sababta aan u jecel nahay hilibka. ”
Baarayaasha jaamacada iswiidhishka ee Lund ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwii ugu horeeyey aduunka ee si guul leh u soo bandhiga 'iska caabin calalinta' hilibka hemp ku dhisan.
Barootiinnada hemp-ka ayaa lagu kariyey heerkulka sare iyo cadaadiska sare si ay u soo saaraan muuqaal hilib badan, taas oo ka dhigaysa in badeecaduhu ay aad u soo jiitaan macaamiisha, ayay tidhi Karolina Östbring oo ah cilmi-baare cunto.
- Waxaan la kulannaa musiibo xagga cimilada ah oo dad badani ay uga wareegaan qayb aad u badan oo borotiinka xoolaha ah una beddelaan khudradda si loo yareeyo saameynta cimilada ee waxa aan cunno, ayay tiri Östbring. “Aadanaha runtii waxaan jecel nahay inaan wax ku calalinno. Taasi waa sababta aan u jecel nahay hilibka. ”
Cilmi baarayaashu hadda waxay rajeynayaan guul la mid ah tan kufsiga. Östbring wuxuu leeyahay hemp iyo canola ayaa bixin kara in ka badan kala bar baahida borotiinka.
Haraaga ka soo baxa soo saarista saliida la kufsaday, keegga la kufsaday, waxaa ku jira borotiinno ka badan hilibka. In kasta oo ay kujirto borotiin badan, keega la kufsaday wuxuu leeyahay dhadhan qadhaadh waxaana inta badan loo isticmaalaa quudinta lo'da, laakiin cilmi baarayaashu waxay ku hawlan yihiin sidii ay uga adkaan lahaayeen dhadhanka qadhaadh.
"Ma jiraan khudaar ka kooban uun jirkeena saxda ah ee jirkeenu u baahan yahay, laakiin soya iyo kufsiga ayaa ah kuwa ugu cufan boqortooyada dhirta oo dhan," ayaa lagu yidhi warbixinta reportsstbring.
Baarayaasha iswiidhishka ah kaligood kuma aysan eegin sahminta hilibka hemp ku salaysan. Bishii Luulyo, seddex shirkadood oo New Zealand ah ayaa ku dhawaaqay inay soo saarayaan khad alaab cunno ku salaysan, oo ay ku jiraan hilib beddel ah.
Justin Lemmens iyo Kyran Rei, oo ah aasaasayaasha shirkadda Sustainable Foods Ltd. ayaa yidhi: "Marka laga eego dhinaca nafaqada, alaabtayada oo dhami waxay isticmaalaan hemp, taas oo loo arko inay tahay mid ka mid ah ilaha cuntada ee ugu dhameystiran nafaqada adduunka." - mid ka mid ah shirkadaha ku lugta leh.
Burgers-kooda ayaa la filayaa inay ku dhuftaan khaanadaha New Zealand horraantii 2021.
Ilaha ay ka mid yihiin SVT (SE), TheGrowthOp (EN)
caafimaad lehcaafimaadkaxagashaNew Zealandcilmi baariscuntoIswiidhan
Cannabidiol ama CBD waa meel walba maalmahan. Waxaa sidoo kale si fiican uga dhex muuqda boqortooyada xayawaanka. Eeyaha, bisadaha, ...
Maalinta Dunida Dunida: cannabis iyo whiskey si wadajir ah ayey u shaqeeyaan? CBD cocktails si aad naftaada u sameyso.
Horumarro badan oo cusub ayaa ka socda dhinaca cabitaannada isku dhafan. Kala-baxyada dhaqameed ee isku dhafan ee gaarka ah, ...